Chrome မှာဝဘ်စာမျက်နှာသတိပေးချက်များကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ Androidsis
Ignacio Sala | | Android application များ, လဲ tutorial
ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံလည်ပတ်သောအခါ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေသောစာမူအသစ်များ၊ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများနှင့်အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံလိုလျှင်ပိုစတာကိုပြသသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ထံအပ်နှံထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ သင့်ခေါင်းစဉ်နှင့်မသက်ဆိုင်သောမည်သည့်အသိပေးချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့ပါ.
အသိပေးချက်များကိုသက်ဝင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိတ်ကြားသောဤပိုစတာဖြစ်လာသည် ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာသို့ကျွန်ုပ်တို့လာသောအခါပြသသောသူတို့၏နောက်ထပ်တစ်ခု။ မုန်းတီးမှု၊ ကွတ်ကီးစသည့်ပိုစတာများနှင့်မတူသည့်အကြောင်းကြားစာများ၏ပိုစတာ သင်အဲဒါကိုလက်ခံစရာမလိုပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်မ ၀ င်စားသောအကြောင်းကြားစာများဖြင့်နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်းမပြုလိုပါက။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီအမျိုးအစားပြproblemsနာများအတွက်, အဖြေတစ်ခုဖြတ်သန်းသွားအဖြေတစ်ခုရှိသေး၏ သတိပေးချက်များအားလုံးကိုပိတ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal သည် notifications များကိုကျွန်ုပ်တို့မခံယူလိုသော web page များကိုသာလက်ခံခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Google Chrome ကိုငါတို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့မင်းကိုမင်းကိုညွှန်ကြားလိမ့်မယ် setting များကို လျှောက်လွှာ။
အသိပေးချက်များမီနူးတွင်၊ ကိုနှိပ်ပါ ကွန်ရက်စာမျက်နှာများမှ.
အသိပေးချက်အားလုံးကိုပိတ်ပါ ခလုတ်ကိုပိတ်ထားသည့် Google Chrome အသိပေးချက်များ.
တိကျသောဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှသတိပေးချက်များကိုဖယ်ရှားပါ။ အကယ်၍ ဤအရာသည်ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ကဏ္theတွင်ဖော်ပြထားသောဝဘ်စာမျက်နှာကိုနှိပ်ရမည် ခွင့်ပြုထားသည် နှင့်အပေါ်ကိုနှိပ်ပါ ဖျက်ပါ။ ပြန်တင်ပါ
အားလုံးသတိပေးချက်များကိုပိတ်ထားလျှင် Chrome သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပို့ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည် မည်သည့်ဝဘ်စာမျက်နှာမှသတိပေးချက်များ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုမတော်တဆအဖြစ်လက်ခံခဲ့သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတိပေးချက်များကိုဆန့်ကျင်သည်မဟုတ် (အမှန်မှာ Androisis ၌ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်) အလွဲသုံးစားမှုလူကြိုက်များဖြစ်လာသည် အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များ (ဤကိစ္စတွင်ဘရောင်ဇာများကကမ်းလှမ်းသည်) ကို၎င်းသည်နောက်ခံထားရှိသည်။ လူများကသူတို့ကိုအားသာချက်မရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Chrome မှာဝဘ်စာမျက်နှာသတိပေးချက်များကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
chrome ကို uninstall နှင့် notifications များထဲက ...
Ignacio လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် Firefox ကိုအကြိမ်တစ်ထောင်ကြိုက်ပါတယ်
Ignacio Lopez အားပြန်ပြောပါ
Firefox က၎င်း၏မိုဘိုင်း browser ကမ်းလှမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည်